राज कुन्द्रा घटनामा ठूलो खुलासा, प्रहरीले राजलाई फसाउन गहनालाई कसरी प्रयोग गर्यो ? « Etajakhabar
एजेन्सी । अ श्लि ल फिल्म निर्माणमा राज कुन्द्र पक्राउ परेपछि नयाँ कुराको खुलासा हुँदै गएको छ । अभिनेत्री गहना वशिष्टले प्रहरीले पक्राउ नगर्नका लागि आफुसंग १५ लाख रुपैया मागेको बताएकी छन् । गहनाले राजको घटनाका बारेमा बारम्बार नयाँ कुरा सार्वजनिक गरिरहेकी छन् । राज आफ्नो साली शमिता शेट्टी को लागि पनि फिल्म बनाउने तयारीमा रहेको जानकारी पनि गहनाले दिएकी थिइन् ।
भारतीय मिडिया इन्डिया टुडेलाई दिइएको अन्तर्वार्तामा गेहनाले बताएकी थिइन् कि कसरी पुलिसले उनीमाथि एकता कपूर र राज कुन्द्राको नाम यस नाममा राख्न दबाब दिएको थियो। यति मात्र हैन, गेहनाले यो पनि भनिन् कि पुलिसले उनी लाई यस मामला मा गिरफ्तारी बाट बचाउन को लागी १५ लाख रुपैयाँ सम्म घूस मागेको थियो। यस बाहेक, गहना धेरै कुराहरु बताएको छ।
अन्तर्वार्ताको क्रममा गेहनाले मुम्बई पुलिसलाई आरोप लगाएकी थिइन् कि पुलिसले उनलाई पक्राउ नगर्न १५ लाख रुपैयाँ मागेको थियो। गेहनाका अनुसार, पुलिसले उनलाई भन्यो कि यदि १५ लाख रुपैया प्रहरीलाई दिए उनलाई पक्राउ गरिने छैन ।
गहना वशिष्ठले भने, ुमैले पुलिसलाई पैसा दिन अस्वीकार गरें किनकि मैले सोचेँ कि जब मैले केहि गल्ती गरेको छैन तब म किन डराउनु ? मैले काम गरेको भिडियो बोल्ड सामग्री थियो तर अ श्ली ल छैन। तब देखि म विश्वास गर्दछु कि राज कुन्द्रा र मैले केहि गलत गरेका छैनौं। गहना वशिष्ठले यो पनि आरोप लगाइन् कि पुलिसले भनेको उनले नमाने ठूलो परिणाम भोग्नु पर्नेछ भन्दै चेतावनी दिइयो ।
गहना यहीं रोकिइनन् उनले अगाडी भनिन्, पुलिसले जे ल बाट राहत दिन को लागी धेरै आकर्षक अफर पनि दिए । तर म जे लमै बस्न राजि भएँ मैले पाँच महिना जे ल मा बिताएँ। अब जब च्याटको कुरा सबै सबै सार्वजनिक भइसकेको छ, सबैले मलाई स्पष्टीकरण को लागी सोधिरहेका छन्। म यी सबै कुराहरु सार्वजनिक गर्न चाहन्नथे तर अब पुलिसले मलाई त्यसो गर्न बाध्य पारेको छ। गहना आफै पनि राज कुन्द्राको झैं आरोपमा पक्राउ परेकी थिइन् । उनी ५ महिना जे ल वसेर हालै बाहिर आएकी हुन् ।
बाल्यकालदेखि नै प्रेमिकाको मामिलामा अगाडि रहेका रणबीरले ऐश्वर्यालाई प्रभावित पार्न झुटसमेत बोले